First Poster for Anyone Can Cook | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » First Poster for Anyone Can Cook	8
Posted by အောင် မိုးသူ on Jul 8, 2016 in Creative Writing, Movies/TV, My Dear Diary | 8 comments
သြဂုတ်လမှာ စလွှင့်မယ် ဆိုပေမယ့်။ အခုမှ အစမို့ ပိုစတာပဲ ထွက်ပါသေးတယ်။ About အောင် မိုးသူ
မမချွိ says: ချစ်စရာလေး ပါဆို
အောင် မိုးသူ says: ဟီးးးးးး အကောင်းဖြစ်အောင် လုပ်နေပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့။
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: မက်စိထဲတော့ ကြက်ကင်ပဲမြင်တယ် ဗိုက်ဆာချက်… ဂွီဂွီ ဂွမ်ဂွမ်…
အောင် မိုးသူ says: အာ့ အတုကြီး ဟိဟိ
မြစပဲရိုး says: ဒါကြောင့် ထင်ရဲ့။ ကြက် ကိုကြည့် နေတဲ့ အကြည့်မှာ သိပ်ပြီး အားပါးတရ မရှိနေနေဘူး။
Well Done Mg Aung! I am so proud of you! :-))
တောတွင်းပျော် says: ဒီ ဟာသကား
တော်တော်ရီရမယ်ထင်တယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဖွားကြီး သိပ်ဝုန်းတာပဲ
Yae Myae Tha Ninn says: လူလိုရင်ပြောပါ.. စားဖို့ ဘကြီးအောင်ရေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.